Fambolena anaty rano | Fiaretana haran-dranomasina
Miatrika fanamby tsy mbola nisy toa azy izahay. Ahoana no ahafahantsika mamahana ny fitomboan'ny isan'ny mponina manerantany manoloana ny fihenan'ny tahiry trondro dia sy ny fitomboan'ny fiantraikan'ny tontolo iainana avy amin'ireo rafi-pisakafoanana misy antsika ankehitriny? Ny tena zava-dehibe dia ahoana no fomba anaovantsika izany amin'ny fomba maharitra tontolo iainana ary mahasoa ny vondron'olona amoron-tsiraka?
Ity toolkit ity dia natao ho an'ny mpitantana ranomasina sy ireo mpampiasa izay miasa ao anaty rafitra vatohara izay misy tranom-boankazo fiompiana trondro amoron-dranomasina na mandinika ny fanapahan-kevitry ny fitantanana momba ny fomba ahafahanao mamela ny tranon'ny fiompiana trondro ao amin'ny tontolo ivoho.
Ny vondrom-piarahamonina, governemanta, sehatra tsy miankina ary andrimpanjakana siantifika dia afaka ary tsy maintsy miaro ny ranomasintsika, mampitombo ny fiantohana ara-tsakafo ary manatsara ny fivelomana. Ny fiompiana anaty jono sy ny jono maharitra dia mety ho ampahany amin'ny vahaolana amin'ity fanamby manerantany ity, fa tsy maintsy manjono sy mamboly amin'ny fomba mety isika.
Ity fitaovana ity dia manazava ny hevitra momba ny fiompiana anaty tontolo iainana amoron-dranomasina sy ny tontolo iainana ny haran-dranomasina, mifantoka manokana amin'ny fiompiana hazandrano:
Inona no atao hoe fiompiana anaty rano? - ny fotokevitra fototra momba ny fiompiana anaty fiompiana sy ny maha-zava-dehibe ny fiantohana ara-tsakafo sy ny fiveloman'ny vondron'olona amoron-dranomasina.
Toe-karena manerantany amin'ny fiompiana trondro - ny toerana manerantany amin'ny fiompiana trondro an-dranomasina, anisan'izany ny karazan-java-maniry novokarina sy ny firon'ity sehatra mitombo any amin'ny faritry ny haran-dranomasina tropikaly ity.
Fomba fambolena - ny tsingerin'ny famokarana sy ny fifanakalozan-kevitra momba ny fomba fiompiana tranom-borona sy penina ho an'ny fiompiana trondro an-dranomasina amin'ny tontolo iainana tropikaly.
Na dia mety manana anjara biriky amin'ny famatsiana ara-pahasalamana mahasalama aza ny fiompiana anaty rano ho an'ny planeta mitombo, ity hetsika ity dia mety hisy fiantraikany, indrindra raha tsy tantanana tsara. Ity fitaovana ity dia manarona ireo fanamby ara-tontolo iainana mifandraika amin'ny fiompiana anaty akondro sy ny fomba fanalefahana ny risika sy ny fiantraikan'ity fomba famokarana sakafo ity:
Ny fiantraikan'ny fiompiana anaty akondro amin'ny tahiry dia - ny fiatraikany lehibe indrindra amin'ny fiompiana anaty akondro amin'ny tahiry ala sy ny tolo-kevitry ny fitantanana hampihenana ny fiantraikany.
Ny fiantraikan'ny fiompiana anaty akondro amin'ny toeram-ponenana - inona no mahatonga ny fiatraikany amin'ny toeram-ponenana mitsikera, toy ny haran-dranomasina sy ny ahidrano, ary inona no azo atao hanalefahana ireo fiantraikany ireo.
Fandotoana rano - ny antony lehibe mahatonga ny fahalotoan'ny rano ateraky ny fiompiana trondro ary inona ny fepetra azo raisina mba hampihenana na hisorohana ireo fiantraikany ireo.
Ny fahasalaman'ny aretina sy ny trondro - Tolo-kevitra momba ny fitantanana mba hitandroana ny trondro ho salama ary hamahana ary hitsaboana aretina raha sanatria misy izany.
Ny governemanta dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famolavolana ny lalàna, ny politika ary ny fitsipika hahafahana mampivoatra ny tontolo iainana ny tontolon'ny fiompiana anaty rano. Tafiditra ao anatin'izany ny fananana dingan-dàlana mamela malalaka amin'ny fiandohan'ny asa iray, ao anatin'izany ny torolàlana momba ny fisafidianana ny toerana sy ny fomba fitantanana ny toeram-pambolena:
Rafitra ara-dalàna sy ara-dalàna mba hanohanana ny fampandrosoana maharitra ny fiompiana anaty akondro - ao anatin'izany ny ohatra iray momba ny fomba hifehezana ny fiompiana anaty rano amin'ny karazan'olona maro sy fanontaniana lehibe hapetraka rehefa mamaritra ny rafitra mifehy ny fiompiana anaty rano.
Fanombanana ny fiantraikan'ny tontolo iainana ho an'ny hetsika fiompiana anaty akondro - ny fizotrany sy ny fomba fanao matetika ampiharina ary ny fiheverana momba ny lalàna mifehy izay hanohanana ny fitantanana maharitra.
Fisafidianana ny tranonkala, ny fandrindrana ny habaka ary ny fomba fitantanana ny faritra ho fampandrosoana ny hetsika fiompiana amoron-dranomasina - hevi-dehibe tokony hodinihina amin'ny fotoana nisafidianana ny toerana sy ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny kalitaon'ny rano ary ny fahasalaman'ny trondro. ny tranga fianarana manome ohatra ny fomba fitantanana maharitra.
Ao amin'ny fizarana farany dia hianaranao ny fomba fanaovana drafitra eo amin'ny fiaraha-monina ary hahatakatra ny fiheverana ara-tsosialy sy toekarena ho an'ny fampandrosoana ny fiompiana anaty akondro:
Inona no atao hoe fiompiana anaty fiarahamonina? - inona no ilain'ny mpandray anjara tafiditra amin'ny fampandrosoana ny fiompiana anaty rano, sy ny anjara asany ary ny fandraisany anjara amin'ny drafitra. Ny laharam-pahamehana amin'ny fandidiana sy ny fiheverana ny tsena ho an'ny karazana voafantina dia tafiditra ao koa.
Ankoatr'izay, mihoatra ireo loharanom-pahasalamana 101 fiompiana trondro ireo dia namorona a antontan-taratasy fanadihadianamanokatra fisie PDF momba ny fampandrosoana ny fiompiana trondro maharitra any amin'ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka any Philippines, Etazonia, Madagasikara ary Belize. Ity antontan-taratasy ity dia mifantoka amin'ny fepetra manan-danja izay nahatonga ny fahombiazan'ny tetikasa sy ny fanamby ary ahitana fanadihadiana momba ny trondro, akorandriaka ary ahidrano.
manokatra fisie PDF
Kitiho ny sary etsy ambony raha te hiditra amin'ilay mpitari-dalana.
Manantena izahay fa ity atiny ity sy ireo loharanom-pahalalana nomena dia hampitombo ny fahalalanao ny fomba hampiroboroboana maharitra ny fiompiana anaty tontolo iainana amin'ny haran-dranomasina mba hananana sakafo ara-pahasalamana sy hiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina.
Ity atiny ity dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny Programan'ny Micronesia sy ny programa momba ny fambolena anaty rano eran-tany. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fiompiana anaty rano sy programa maharitra momba ny sakafo sy rano maharitra ny TNC:
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharana momba ny fiompiana anaty rano manerantany
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharana Sakafo sy rano maharitra